Akanalo igqubu ngeChiefs | Isolezwe
Akanalo igqubu ngeChiefs
ezemidlalo / 9 August 2018, 12:32pm / Mthokozisi Mncuseni
UKEAGAN Buchanan weMaritzburg United uthi kuyamthokozisa ukuthenjwa wumqeqeshi weqembu njengoba esanda kufika eMphithi
UMDLALI omusha weMaritzburg United, uKeagan Buchanan, akayibambele gqubu iKaizer Chiefs yize imgqume unyaka wonke engalithinti ibhola okuholele ekutheni asayine inkontileka yeminyaka emithathu nezikaFadlu Davids ekuqaleni kwesizini ka-2018/2019.
UBuchanan obethwele kanzima ngasesikimini iChiefs isaholwa uSteve Komphela, uwuqalile umdlalo weqembu lakhe elisha weligi neLamontville Golden Arrows yize bethelwe othulini ngo 2-0. Lo mdlali uqale lapha ngoba uFadlu elinyalelwe ngabadlali ababili abamqoka ngaphambi komdlalo.
Ngokwenkulumo kaFadlu ngemuva komdlalo wabo ne-Arrows uphoqelekile ukuba amsebenzise uBuchanan yize bekucaca ukuthi ubengakakulungeli ukuqala umdlalo.
Naye uBuchanan, odlale amahlandla ayishumi eminyakeni emibili ayihlale kuMakhosi, ushilo ukuthi kusazoba nzima kuyena ukuthi abe wumqemane ngokwanele.
“Kukona konke okwenzeke namuhla, okuyikona okungijabulise kakhulu ukubuyela enkundleni. Kungikhulisela ukuzethemba ukubona kuseva ukuthi umqeqeshi uthembele kimina.
"Uma ufika eqenjini elisha kumqoka ukusheshe ungene esitayeleni ikakhulukazi uma ufika usuka emaqenjini athathwa njengamakhulu. Esengikubonile ukuthi ngizokhula ngoba kuyasizwana lapha kwiTeam of Choice.
"Ngijabule kakhulu kodwa ngeke ngizixake ngokuningi ngaphandle kokuzinika isikhathi,” kusho uBuchanan.
Ebuzwa ngokuhlala kwakhe isikhathi eside engadlali kwiChiefs, lo mdlali oqale ukugqama kwiBloemfontein Celtic, uthe uyasemukela isimo abebhekene naso futhi ujabule ngoba simkhulisile.
“Beziziningi kakhulu izinsuku lapho bengibona khona ukuthi kumnyama. Bengiziduduza ngokuthi ngizikhumbuze ukuthi asikho isidingo sokufuna ukuzwelwa kepha kufanele ngibhukule ngoba umndeni wami ububheke ukudla etafuleni.
"Okwami wukudlala ibhola ngakho-ke uma kufanele ngivule amathuba okubonakala enkundleni bekusemqoka ukuhlale ngilindile ukuthi ngenze lokhu abaqashi bami abebekubheke kimina.
"Ngijabule ukuthi sengidlulile kulesi simo. Akuyona into elula ukudlala isikhathi eside kangaka ungalimele. Ngiyazi kusazothatha isikhathi ukuthi ngibuyele ezingeni lami engilaziyo.
"Sekuqalile kuyangakha ukusebenza nomqeqeshi ofana noFadlu. Angiyibambele igqubu iChiefs,” kusho lo mdlali.
Kulo mdlalo uBuchanan uqale kahle kubonakala ukuthi yini angayenza kodwa kwahamba isikhathi kwacaca ukuthi ngeke awuqede lo mdlalo.
Ugcine ekhishiwe maphakathi nesiwombe sesibili indawo yakhe yathathwa uTlou Masegela ongene neminyakazo ebonakalayo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
Namuhla iMaritzburg izobhekana neFree State Stars emdlalweni we-Absa Premiership eGoble Stadium, ngo-7.30 ebusuku.
NgeSonto izobhekana neCape Town City koweMTN 8 eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu ngo-3 ntambama.